တရုတ်နိုင်ငံက နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ရှေ့ပြေးဇုန်များ တက်ကြွစွာ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ချက်ရှိကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြော - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ မြို့တော် ပေကျင်း ဆွန်းယီခရိုင်ရှိ ထျန်ကျူး ဘက်စုံချိတ်ဆက်ဇုန်ရှိ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce အတွက် ဆေးဝါးသွင်းကုန်ဂိုဒေါင်အတွင်းပိုင်း မြင်ကွင်းအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန (MOC) က နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးတွင် ဈေးကွက်ယှဉ်ပြိုင်မှုများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ဆိုင်ရာ ရှေ့ပြေးဇုန်များ တက်ကြွစွာ ချဲ့ထွင်သွားရန် ဇူလိုင် ၁၂ ရက်က ကတိပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။အချို့မြို့များသည် ရှေ့ပြေးဇုန်သစ်များ တည်ထောင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ကောင်စီသို့ လျှောက်လွှာများ တင်သွင်းထားကြောင်းနှင့် MOC အနေဖြင့် ဆက်စပ်သော လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်သွားရေးအတွက် နှီးနွယ်သောဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စီးပွားရေးနှင့် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန လက်ထောက်ဝန်ကြီး Ren Hongbin က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
MOC အနေဖြင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ဉာဏမူပိုင်ခွင့် ကာကွယ်ရေးအတွက် လမ်းညွှန်ချက်များ ဖော်ထုတ်ရန်၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce လက်လီ တင်သွင်းကုန်များစာရင်း သင့်တင်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန် စီမံခန့်ခွဲမှု ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ဖလှယ်ရေး လွယ်ကူစေရန်လည်း ကတိပြုထားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce သည် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု စုစုပေါင်းထက် ပိုမိုသွက်လက်စွာ တိုးချဲ့လျက်ရှိကြောင်းနှင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု စုစုပေါင်းရှိ ၎င်း၏ ဝေစုမှာ သိသိသာသာ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
၂၀၁၅ ခုနှစ်မှစ၍ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံတော်ကောင်စီသည် အုပ်စုငါးခုတွင် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce ရှေ့ပြေးဇုန် ၁၀၅ ခု တည်ထောင်လျက်ရှိကြောင်း၊ စီးပွားလုပ်ငန်းပုံစံအသစ်မှာ တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှု တိုးတက်ရေး မောင်းနှင်ရာတွင် အားမာန်တစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်များသည် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် ယွမ် ၁.၆၉ ထရီလီယံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ရာ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကထက် ၃၁.၁ ရာခိုင်နှုန်း မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း၊ လွန်ခဲ့သည့် ငါးနှစ်အတွင်း တရုတ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce မှာလည်း ၁၀ ဆနီးပါး တိုးတက်လာခဲ့ကြောင်း Ren က ပြောခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, July 12 (Xinhua) — China’s Ministry of Commerce (MOC) on Monday pledged to actively expand the integrated pilot zones for cross-border e-commerce to cultivate new competitive edges in foreign trade.
China’s cross-border e-commerce has been expanding much faster than overall foreign trade, and its share in overall foreign trade has gone up significantly.
Since 2015, China’s State Council has established 105 cross-border e-commerce pilot zones in five batches. The new business model has becomeavibrant force driving China’s foreign trade growth.
China’s cross-border e-commerce imports and exports reached 1.69 trillion yuan (about 260.9 billion U.S. dollars) in 2020, up 31.1 percent year on year. Over the past five years, China’s cross-border e-commerce has grown by nearly 10 times, according to Ren. ■
Photo : Two workers walk insideawarehouse of imported medicine for cross-border e-commerce in Tianzhu comprehensive bonded zone in Shunyi District, Beijing, capital of China, on March 12, 2021. (Xinhua/Ren Chao)